मैले प्रिपेड दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
चरण2– एड-अनहरू चयन गर्नुहोस्
चरण3– तपाईंले एमबी मेनुबाट चाहनुभएको दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना चयन गर्नुहोस्
चरण 1 - *118*2*1# डायल गर्नुहोस्
चरण2– तपाईंले चाहनुभएको दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना चयन गर्नुहोस्
वा वा वा लेखेर SMS मार्फत 28118 मा पठाउनुहोस्।
कृपया सफल सक्रियकरणको लागि आफूसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण: MB-Week सक्रियकरणको लागि RM9।
म्याद समाप्त भएपछि दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजनाहरू स्वतः नवीकरण हुनेछन्?
हुन्छ। तपाईंको खातामा योजना प्राप्त गर्न पर्याप्त ब्यालेन्स छ भने MB-Day र MB15 बाहेकका योजनाहरू म्याद समाप्त भएपछि स्वतः नवीकरण हुनेछन्।
मेरो सदस्यता नवीकरण गर्ने बेला भएको छ भनी मैले SMS रिमाइन्डर प्राप्त गर्नेछु?
गर्नुहुन्छ। तपाईंको स्वत: नवीकरण गर्ने समय आउँदा SMS सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि अर्को SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सदस्यताको अवधिमा मेरो प्रयोगको बारेमा कुनै सूचनाहरू प्राप्त गर्नेछु?
हो, तपाईंलाई उपयोगका विभिन्न चरणहरूमा SMS सतर्कताहरू पठाइनेछ र वेब रिडाइरेक्ट गरिनेछ, उदाहरणको लागि, तपाईंको कोटा लगभग प्रयोग भएर सकिन लाग्दा वा नवीकरण आवश्यक पर्दा।
मलाई दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजनाहरू प्राप्त गर्न आवश्यक हुने न्यूनतम क्रेडिट सीमा कति हो?
आफूले चाहनुभएको योजना प्राप्त गर्न पर्याप्त ब्यालेन्स रकम तपाईंको खातामा हुन आवश्यक हुनेछ। उदाहरणको लागि, MB-Week प्राप्त गर्न, तपाईंसँग आफ्नो सदस्यताको वालेटमा 9RM भन्दा बढी हुन आवश्यक हुन्छ।
मैले मेरो डाटा उपयोग कसरी जाँच्न सक्छु?
चरण3– दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना कोटाको विस्तृत बाँकी रकमको लागि माथितिर स्वाइप गर्नुहोस्
म मेरो दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजनाको सदस्यता रद्द गर्न सक्छु?
हो, तपाईं MB2 र MB-Day बाहेकका यी योजनाहरूको सदस्यता रद्द गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सदस्यता रद्द गर्नको लागि *118*2*4# डायल गर्नुहोस्। तपाईंको योजनालाई प्रमाणीकरण गरिपछि तुरुन्तै हटाइनेछ।
MB2 र MB-Day को लागि, तपाईंले स्वतः नवीकरण रोक्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ र योजनाको समाप्तिमा तपाईंको योजनालाई हटाइनेछ। स्वतः नवीकरण रोक्नको लागि *118*2*5# डायल गर्नुहोस्।
मेरो खाता निष्क्रिय छ भने मैले MB डाटा योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईंले MB डाटा योजनाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको खाताको स्थिति सक्रिय गरिएको हुनुपर्छ।
मेरो दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना निष्क्रिय समयामा पनि स्वतः नवीकरण हुनेछ?
हुँदैन, तपाईंको योजना निष्क्रिय अवधिमा स्वतः नवीकरण हुनेछैन।